Xiaomi Mi A1 အတွက် Android 8.1 Oreo ရတော့မလား ? | Myanmar Mobile App
Home Trending Smartphone Xiaomi Mi A1 အတွက် Android 8.1 Oreo ရတော့မလား ?
Xiaomi Mi A1 ကိုင်နေသူများအတွက်တော့ သတင်းကောင်းပါ။ သူ့အတွက် Android 8.1 Oreo Beta ကို ရှောင်မီက စမ်းသပ်နေတယ်လို့ သတင်းထွက်လာပါတယ်။ ရှောင်မီက ယခင်နှစ် စက်တင်ဘာလမှာ သူ့ရဲ့ ပထမဆုံး Android One စမတ်ဖုန်း ဖြစ်တဲ့ Mi A1 ကို ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက်ပိုင်း ယခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလမှာ Android 8.0 Oreo ကို သူ့အတွက် ဖြန့်ချီပေးခဲ့ပါတယ်။
Android 8.1 Oreo Beta ကို စမ်းသပ်နေတဲ့အပြင် ဇွန်လအတွက် Security Patch ကိုလည်း ဖြန့်ချီပေးဖို့ ရှိနေပါတယ်။ Android 8.1 Oreo ကို ဖြန့်ချီမယ့် နေ့ကိုတော့ ရှောင်မီက မကြေညာသေးပါဘူး။ လာမယ့် ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာ OTA ကနေ ဖြန့်ချီပေးမယ်လို့ ထင်ရပါတယ်။ သူဟာ Android P ထွက်လာရင်လည်း အစောဆုံးရရှိမယ့် ဖုန်းများထဲမှာ ပါမယ်လို့ ရှောင်မီက အတည်ပြုထားပါတယ်။
ထူးခြားတာက သူ့မှာ Android OS Update ကို လျှင်မြန်စွာ ရရှိစေတဲ့ Google Treble Support မပါတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ Specs များကို ပြန်လည် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ Mi A1 မှာ ၅.၅ လက်မ Full HD Display , Snapdragon 625 Chipset , 4GB RAM, 64GB Internal Storage ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် Mi6မှာလို Mi A1 ရဲ့ အနောက်ဘက်မှာ ကင်မရာ ၂ လုံး ပံ့ပိုးပေးထားပါတယ်။ လက်ဗွေရာ အာရုံခံ ကိရိယာကို အနောက်ဘက်မှာ တပ်ဆင်ထားပါတယ်။ 3080mAh Battery တပ်ဆင်ထားပြီး USB-C Port ကနေ အားသွင်းရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ MIUI တော့ မပါဘဲ Stock Android ထည့်ထားပါတယ်။
Xiaomi Mi A1 အတှကျ Android 8.1 Oreo ရတော့မလား ?
Xiaomi Mi A1 ကိုငျနသေူမြားအတှကျတော့ သတငျးကောငျးပါ။ သူ့အတှကျ Android 8.1 Oreo Beta ကို ရှောငျမီက စမျးသပျနတေယျလို့ သတငျးထှကျလာပါတယျ။ ရှောငျမီက ယခငျနှဈ စကျတငျဘာလမှာ သူ့ရဲ့ ပထမဆုံး Android One စမတျဖုနျး ဖွဈတဲ့ Mi A1 ကို ကွညောခဲ့ပါတယျ။ အဲဒီနောကျပိုငျး ယခုနှဈ ဇနျနဝါရီလမှာ Android 8.0 Oreo ကို သူ့အတှကျ ဖွနျ့ခြီပေးခဲ့ပါတယျ။
Android 8.1 Oreo Beta ကို စမျးသပျနတေဲ့အပွငျ ဇှနျလအတှကျ Security Patch ကိုလညျး ဖွနျ့ခြီပေးဖို့ ရှိနပေါတယျ။ Android 8.1 Oreo ကို ဖွနျ့ခြီမယျ့ နကေို့တော့ ရှောငျမီက မကွညောသေးပါဘူး။ လာမယျ့ ရကျသတ်တပတျအနညျးငယျအတှငျးမှာ OTA ကနေ ဖွနျ့ခြီပေးမယျလို့ ထငျရပါတယျ။ သူဟာ Android P ထှကျလာရငျလညျး အစောဆုံးရရှိမယျ့ ဖုနျးမြားထဲမှာ ပါမယျလို့ ရှောငျမီက အတညျပွုထားပါတယျ။
ထူးခွားတာက သူ့မှာ Android OS Update ကို လြှငျမွနျစှာ ရရှိစတေဲ့ Google Treble Support မပါတာ ဖွဈပါတယျ။ သူ့ရဲ့ Specs မြားကို ပွနျလညျ ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။ Mi A1 မှာ ၅.၅ လကျမ Full HD Display , Snapdragon 625 Chipset , 4GB RAM, 64GB Internal Storage ထညျ့သှငျးထားပါတယျ။ စှမျးဆောငျရညျမွငျ့ Mi6မှာလို Mi A1 ရဲ့ အနောကျဘကျမှာ ကငျမရာ ၂ လုံး ပံ့ပိုးပေးထားပါတယျ။ လကျဗှရော အာရုံခံ ကိရိယာကို အနောကျဘကျမှာ တပျဆငျထားပါတယျ။ 3080mAh Battery တပျဆငျထားပွီး USB-C Port ကနေ အားသှငျးရမှာ ဖွဈပါတယျ။ MIUI တော့ မပါဘဲ Stock Android ထညျ့ထားပါတယျ။
Previous articleZTE Nubia Z18 မှာ ဘေးဘောင်မဲ့ မျက်နှာပြင် ပါမည်
Next articleGoogle Translate မှာ ဘာသာစကား ၅၉ ခုကို Offline သုံးနိုင်ပြီ